Test Drive: Mazda Driving Experience
????? ??????? ?????????? ????? ပွဲအတွင်း Mazda ကားများကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရာတွင် အောက်ပါ Features များကို စမ်းသပ်လေ့လာသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လာမည့် ???????? နှင့် ?????? နှစ်ရက်ထဲမှာ ????? ??????? ?????????? ????? ပွဲကြီးကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်တာကြောင့် Mazda ကားရဲ့ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ချင်သူများ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာလာရောက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်နိုင်ပါကြောင်း နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…။
Skyactiv Technology: ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးသော ပေါက်ကွဲမူစွမ်းအား နှင့် သိပ်သည်းမူစွမ်းအား အမြင့်မားဆုံး ၁၄:၀:၁ အချိုးအစားကြောင့် လောင်စာပေါက်ကွဲမူအားကို ၁၅ ရာခိုင်နူန်း တိုးမြင့်စေပြီး ကား၏ ရုန်းဆွဲအားကိုကောင်းမွန်စေ၍ ဆီစားနူန်းကို အလွန်သက်သာစေပါတယ်။
Mazda Commander Control: Infotainment Function များဖြစ်သော Radio၊ Audio Function နှင့် Safety Function တွေကို Mazda Commander Control ဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ လိုအပ်သလိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာဖြင့် အန္တရယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။ Mazda Commander Control စနစ်ကို Mazda ရဲ့ ကားတိုင်းမှာ ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Heads Up Display Experience: မြို့တွင်းပိုင်း ကားကျပ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ High Way လိုမျိုး အရှိန်မြင့်မြင့်ဖြင့်မောင်းနှင်နေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိမောင်းနှင်နေတဲ့ မိုင်နူန်း နှင့် Driver Information တွေအား ကားရဲ့ ဒိုင်ခွက်ကို ငုံ့ကြည့်နေစရာမလိုပဲနှင့် ကားရှေ့မှန်ဧရိယာအတွင်းမှာပင် ကြည့်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အန္တရယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Dual Climate Control: မောင်းနှင်သူ နှင့် Front Passenger အတွက် Temperature ကို လိုအပ်သလိုသီးသန့်စီ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် Speed 8 ချက်အထိပါဝင်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနှင့်လည်း အထူးကိုက်ညီသင့်တော်တဲ့ Feature တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Sport Mode Paddle Shift Convenience: ကားမောင်းသူ၏ စိတ်တိုင်းကျမောင်းနှင်မူ အလျင်အား ကားကျော်တက်ခြင်း၊ ကားလမ်းပြောင်းခြင်းများအတွက် Sport Mode ပါဝင်ပြီး Paddle Shift ဂီယာလည်း ပါဝင်သေးသောကြောင့် Sporty ဆန်ဆန်မောင်းနှင်ချင်သူများအတွက် ထပ်တူကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Craftsmanship Interior: လက်ရာမြောက်ဖန်းတီးမူနှင့် အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေး ဖန်တီးမူများရဲ့ ရလဒ်ကို Mazda ၏ Fine Craftsmanship Interior အတွင်းခန်းတွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
BOSE Sound System: ဂီတက လူကိုနူးညံစေပါတယ်။ နာမည်ကျော် အရည်အသွေးမြင့် BOSE Sound System ကြောင့် ကားမောင်းရင်း သံစဉ်တွေနဲ့အတူ လွင့်မျော်စီးနှင်းနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်တိုင်းအကျဆုံး မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်မောင်းနှင်ချင်သူးများ ယခုပဲ Register ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
???: 09 897 837 897 - 01 967 02 86
???: 09 456 1111 04 - 09 456 1111 05
နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကဒ် (???) နှင့်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (??????? ???????) တို့ကိုတော့ ယူဆောင်လာပေးကြပါရန်နှင့် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်နိုင်ပါကြောင်း နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…။
#MazdaMyanmar #DrivingExperience #MazdaTestDrive